के हामी आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने हो त ?
बिहिबार, जेठ ०१, २०७७
सफल पौडेल । भरतपुर
संसार भर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस आहिले विश्वको लागि नै चुनौतीको बिषय बनेको छ । यो महामारीले हाम्रो दैनिक जिबनमा मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रमा ठुलै असर परेको छ । नेपाल मात्र नभई विश्वको ठुलो अर्थतन्त्र भएका देशहरु पनि उत्तिकै प्रभावित भएका छन्। यो समयमा विश्व बैंकले पनि देशहरुलाई छुट्टै नीति लिएर आगाडी बढ्न सुझाव दिएको छ ।
यो समयमा नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले पनि छुट्टै नीति लिएर आगाडी बढ्न जरुरि देखिन्छ । देशमा धेरै सानाठूला व्यापारलाई उद्दारको लागि नेपालले ठोश कदम चाल्न जरुरि छ । हिजो मात्रै छिमेकि देश भारतले आफ्नो देशको नाममा सम्बोधन गर्दै देशको नाममा आर्थिक राहत घोषणा गरे जस्तै नेपालले नि आफ्नो देशको हितमा उचित निर्णय लिन जरुरि देखिएको छ।
यो समयमा नेपाललाई निकै नै आर्थिक भार परीरहेको बेला हाम्रो देश पनि आत्मा निर्भरको बाटोमा आगाडी बढ्न जरुरि भएको छ । यो परिस्थितिमा मेडिकल सामग्रीमा देशको ठुलो धन राशी खर्च भएको छ । छिमेकि देश भारतले आफ्नै देशमा नियमित रुपमा २ लाख भन्दा बढी पीपीइ सेट र अन्य आवस्यक सामग्रीको उत्पादन सुरु गरेको छ ।
त्यस्तै गरि के नेपालले पनि आफ्नो देशमा उत्पादन गर्न नसक्ने होर ? आखिर कहिले सम्म हामी सधै परजीबी भएर बाच्नु पर्ने हो ? के पीपीइ र मास्क जस्ता सामग्री हामी आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न सक्दैनौ ? आखिर सामग्री खरिदमा लागेको अर्बौ रकमले हामीले कच्चा पदार्थ र मेसिन जडान गरेर आफ्नै देशमा रोजगारी दिन आफुले उत्पादन गर्न सक्दैनौ ?
अब यो समयमा हामी परजीबी भन्दा नि आत्मनिर्भर भएर आगाडी बढ्ने समय आएको छ। यस्तो हुदा आफ्नो देशको मुद्रा आफ्नो देशमा रहनुको साथै देशको बिकासमा नि टेवा पुग्ने छ । समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस । जब आत्मा निर्भर बन्छौ तब बल्ल हाम्रो देश विकास हुने छ ।
(लेखक ‘सेवा र विकासका लागि युवा’को सक्रिय सदस्य हुनु हुन्छ ।)